Kalafadhigii kowaad ee golaha deegaanka cusub ee Dangorayo oo furmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandKalafadhigii kowaad ee golaha deegaanka cusub ee Dangorayo oo furmay
Kalafadhigii kowaad ee golaha deegaanka cusub ee Dangorayo oo furmay
January 15, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Kalafadhigii kowaad ee golaha deegaanka cusub ee Dangorayo oo furmay. [Lahaanshaha Sawirka: Puntland Post]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalafadhigii kowaad ee golaha deegaanka cusub ee Dangorayo ayaa maanta oo Axad ah ka furmay degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal, sida ay sheegeen maamulka degmadu.
Kulanka oo socon doona muddo shan beri ah ayaa diirada lagu saarayaa, arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, sidoo kale waxaa looga hadli doonaa miisaaniyada degmada ee sandka 2017-ka.
Waxaa kalafadhiga ka qeybgalay masuuliyiin ka socday dowladda oo ay kamdi ahaayeen guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faroweyne iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdicasiis Cilmi Koor.
Waa kalafadhigii kowaad oo ay yeeshaan golaha cusub ee degmada Dangorayo, tan iyo markii 22-kii bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay ay golaha deegaanka degmada Dangorayo doorasho muran badan ka dhashay ay Mukhtaar Cabdiraxmaan Axmed ugu doorteen guddoomiye.
March 19, 2017 Madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday agaasimihii la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland
August 30, 2017 Shir ay hoggaaminayso Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka dhici doona gudaha magaalada Garoowe
July 1, 2017 Askari katirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo
Somali famous businessman shot dead by unknown gunmen in Mogadishu
Maxkamada sare ee ciidamada Puntland oo ayiday dilka saddex nin oo katirsan Al-Shabaab iyo Daacish
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada sare ee ciidamada dowladda Puntland ayaa maanta oo Talaado ah dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo katirsan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, sida ay sheegeen saraakiisha maxkamada. Saddexda nin ayaa horey maxkamadaha [...]